Real Madrid Oo Marco Asensio Ku Doonaysa Sadio Mane-Ma Markii Uu Qorshihii Pogba Fashilmay Ayuu Zidane Ku Soo Laabtay Mane? - Gool24.Net
Real Madrid Oo Marco Asensio Ku Doonaysa Sadio Mane-Ma Markii Uu Qorshihii Pogba Fashilmay Ayuu Zidane Ku Soo Laabtay Mane?
Kooxda Real Madrid ayaa diyaar u ah in ay Jurgen Klopp u ogolaadaan in uu xagaagan la saxiixan karo xidiga reer Spain ee Marco Asensio oo uu hore u doonayay in uu Anfield keeno laakiin Madrid ayaa doonaysa in marka hore Liverpool ay keento Sadio Mane.
Real Madrid ayaa Marco Asensio ku dartay liiska ciyaartoyda ay xagaagan iibin karto haddii ay ku heli karto dalab u qalma laakiin iyada oo la ogyahay sida uu Zidane u doonayay in uu la saxiixdo Mane waxay isku dayayaan sidii xiisaha Liverpool ee Asensio ay uga faa’iidaysan lahaayeen.
Wargayska Express ayaa shaaciyay in Real Madrid ay Liverpool u soo bandhigayso saxiixa Marco Asensio si ay markooda u helaan xidiga bartilmaameedka u ahaa ee Sadio Mane.
Inkasta oo uu Jurgen Klopp taageere u yahay Marco Asensio, haddana in Real Madrid ay Sadio Mane ku doonayso ayaa noqon karta dhibaatada ugu wayn ee aanu Klopp ku aqbali karin arintan.
Sadio Mane ayaa soo qaatay xili ciyaareedkii waayihiisa ugu fiicnaa kadib markii uu 26 gool ka soo dhaliyay tartamada oo dhan isla markaana uu door muuqda ku lahaa guushii Reds ay ugu soo guulysatay koobka UEFA Champions league.
Laakiin Marco Asensio oo 44 kulan soo ciyaaray xili ciyaareedkii la soo dhaafay ayaa 6 gool oo kaliya soo dhaliyay taas oo muujinaysa sida ay labada xidig ugu soo jireen xaalado gabi ahaanba kala duwanaa.
Wararka ayaa sheegaya in haddii ay Liverpool aqbali karto heshiiska ay Real Madrid ku doonayso Sadio Mane ee uu Marco Asensio qaybta ka yahay in ay taasi albaabka u furi lahayd saxiixa Nicolas Pepe oo ka tirsan kooxda Lille kaas oo ay Reds isha ku haysay xagaagan.
Zinedine Zidane oo muhiimada kowaad ka dhiganayay saxiixa Pual Pogba ayaa hadda u muuqda mid ayna riyadiisu suurtogal u muuqan xagaagan kadib markii ay Man United meel adag iska taagtay in Pogba uu kooxdeeda ka baxo.
Zidane ayaa sanadkii 2018 kii doonayay in uu Sadio Mane kala wareego Liverpool laakiin maalmo kadib guushii finalkii Champions league ee uu Liverpool ka gaadhay waxa uu iska casilay shaqada Madrid taas oo uu markale dib ugu soo laabtay.
Sadio Mane ayaa si cad u sheegay in uu ku faraxsan yahay kooxdiisa Liverpool balse waxa uu sharaf ku tilmaamay in lala xidhiidhiyo koox Madrid oo kale ah.
Liverpool ayaan la filayn in ay Real Madrid ka aqbali karto nooca dalabkan oo kale ah iyada oo hadda Sadio Mane uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu qiimaha badan kubbada cagta kadib sanado layaableh oo uu soo qaatay.